Sacuudiga, Baxrayn iyo Imaaraatka oo ku dhawaaqay beri inay tahay Ciidul Fitri – Radio Daljir
Sacuudiga, Baxrayn iyo Imaaraatka oo ku dhawaaqay beri inay tahay Ciidul Fitri
Juunyo 3, 2019 6:05 g 0
Dalalka Sacuudiga, Baxrayn, Imaaraatka Carabta ayaa ku dhawaaqay ayaa ku dhawaaqay maalinimada beri inay tahay 1da bisha Shawaal, ama maalinta koowaad ee ciidul Fitriga.
Balse dalalka Pakistan, Bangladesh, Australia ayaa dadka muslimiinta ee ku nool waxaa ay sheegeen inay beri tahay maalin bisha barakaysan ee Ramadaan.
Warbaahinta Sacuudiga ayaa sheegay inay munaasabadda Ciidda tahay 4ta June ee beri.
Madaxda Soomaaliya ayaan wali shaacin hambalyada ciidda.
Xoreynta & mideynta Wasiir Gallan ee gobolka Sanaag kabacdi Puntland maanta maxaa la gudboon?
Madaxweynaha Puntland oo hambalyo u diray Ergeyga cusub ee QM